Prof: Cabdisalaan Yaasiin oo ka warramay waxa Nidaamka dawladnimo ee Somaliland ka qalloocday iyo waxa ku kallifay inuu Madaxweyne isu-sharraxo | Saxil News Network
Prof: Cabdisalaan Yaasiin oo ka warramay waxa Nidaamka dawladnimo ee Somaliland ka qalloocday iyo waxa ku kallifay inuu Madaxweyne isu-sharraxo
“Waadigaa arkaya hadday Xisbi tahay iyo hadday Xukuumaddii tahay in kii la doortay ee aynu islahayn kii hore ayuu dhaamayaa intuu soo fadhiisto odhanayo anigaa la I doortay..”
“Dawladnimadii waynu dhisnay waynu toosinnay marka qaylo-dhaanta iyo halka dadku marayo la eego. Laakiin, way innaga qalloocatay (nidaamkii dawladnimadu), haddii qalloocaas ay ku sii socotana nidaamkii dawladnimo inuu sii liico ayaa halis loogu jiraa…” Prof: Cabdisalaan Yaasiin – Waraysi Gaar Ah
Hargeysa,(Saxilnews.com)- Prof: Cabdisalaan Yaasiin oo dhawaan shaaciyey inuu yahay Musharrax u tartami doona jagada Madaxweynennimo ee Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI, ayaa ka warramay waxa wakhtigan ku kallifay inuu isu sharraxo Musharrax Madaxweyne, waxaanu sheegay inay jiraan wax badan oo dhinaca nidaamka dawladnimo iyo ku dhaqanka dimuquraadiyadda Somaliland ka qaldani.
Prof: Cabdisalaan Yaasiin waxa uu sheegay inaanay jirin cid gaar ah oo dhabarka taabatay ama ku dhalisay inuu isu taago Musharrax ku tartami doona jagada Madaxweynaha Xisbiga WADDANI, waxaanu meesha ka saaray inaanu jirin xidhiidh gaar ah oo ka dhexeeya Guddoomiyaha Xisbigaas oo uu isaga si gaar ah ugu wato, balse waxa uu ku dooday in fikir isaga ka soo go’ay uu yahay. Waxaanu Cabdisalaan Yaasiin qodobbadaas iyo arrimo kale oo xasaasi ahba kaga hadlay Waraysi gaar ah oo uu la yeeshay Tifaftiraha Shabakadda Xog-soor Weriye Faysal Xiis Weerar (Afgaab).
Cabdisalaan Yaasiin oo ugu horreyn ka jawaabaya waxa uu xilligan Koofiyadda Siyaasaadda u soo xidho oo isu sharraxo Musharrax u taagan jagada Madaxweynennimo ee Xisbiga WADDANI, waxa uu yidhi; “Laba koofiyadood baan leeyahay oo ah koofiyad Macallinnimo iyo Koofiyad Siyaasi, Koofiyadda Siyaasiga ayaan la soo baxay. Waxaanan u soo gashaday sidii markaan ku dhawaaqay Musharraxnimadayda aan sheegayba iyadoo aan arkayo maanta in dalki meel halis ah marayo, iyadoo 34 iyo 24 sano Somaliland aynu wadnay ka dib.”
“Dawladnimadii waynu dhisnay waynu toosinnay marka qaylo-dhaanta iyo halka dadku marayo la eego. Laakiin, way innaga qalloocatay (nidaamkii dawladnimadu), haddii qalloocaas ay ku sii socotana nidaamkii dawladnimo inuu sii liico ayaa halis loogu jiraa. Markaa, aniguna halkaas baan ka soo kacay qalloocaas inaan toosinno oo waxaan ka tari karo aan ka taro oo aynu dawladnimada aynu dhisannay sii horumarinno.” Sidaa ayuu yidhi Cabdisalaan Yaasiin oo jawaabta su’aashaas sii watay.
Prof: Cabdisalaan Yaasiin waxa uu sheegay in Xisbiga WADDANI tacab badan geliyey, waxaanu yidhi; “Xisbiga WADDANI la yidhaahdo tacab badan baannu gelinnay. Waad ogeyd oo Urur Horyaal la yidhaahdo ayaannu ahayn, Ururkii waa la reebay, markii la reebay annagoo Ururro badan ah ayaa mid waliba goonidiisa markuu qiimeeyey waxaannu ku biirnay WADDANI. WADDANI-na tacab badan baa nagaga baxay, aasaasayaashiisiina waan ka mid ahaa.”
Cabdisalaan Yaasiin oo ka jawaabayey Su’aal laga weydiiyey sida uu ugu rejo wayn yahay in Musharrax Madaxweyne WADDDANI dhexdiisa looga doorto, maaddaama oo Xisbiyada Siyaasadda Somaliland mid walba ninka hor-fadhiyaa u isticmaalo sidii Mulkiyad uu isagu leeyahay, waxa uu ku jawaabay; “Way jirtaa taasi, markaa kol hadday tahay inay Xisbiyadu dhaqan hore lahaayeen. Dimuquraadiyaddu dhiiggay innagaga jirtaa. Laakiin, dimuquraadiyaddii dhaqanka weeye teennu, tii Casriga ahayd waxaad mooddaa ama Xisbi ha noqoto ama dawlad ha noqoto ee wixii la aasaasay ay noqdeen wax kii aasaasay Kursiga ku fuulo. In ninki kursigii ku fadhiisanayo oo odhanayo anigaa iska leh meesha. Waadigaa arkaya hadday xisbi tahay iyo hadday Xukuumaddii tahay in kii la doortay ee aynu islahayn kii hore ayuu dhaamayaa intuu soo fadhiisto odhanayo anigaa la I doortay.”
“Markaa, WADDANI wuu soo dhaweeyey, waakii Guddoomiyuhu sheegay, markaa, waxaan rejaynayaa inuu WADDANI ka dhabeeyo hal-ku-dhiggiisa iyo inuu ummadda iyo dawladnimada horumarinayo, oo WADDANI lagaga daydo nidaamkaas oo uu kuwii hore wax kaga duwanaan doono.” Sidaa ayuu yidhi Prof: Cabdisalaan Yaasiin.
Mar uu ka jawaabayey Cabdisalaan in Jiilalka Somaliland ku dhaqan ee haddii uu tartamo Codka ka doonayaa isugu jiraan saddex Jiil oo Jiil ka mid ahi garanayo isagoo SNM ah dhawr iyo siddeetanaadkii, Jiil garanayo isagoo Macallin Jaamacadeed ah, Jiilka saddexaadna Sheekooyinka uu Warbaahinta ku qoro uun arkaan, sidaa awgeed sida uu u Midaynayo Jiilaalkaas uu Codka uga baahan doono, waxa uu sheegay inuu fikir ahaan ku midayn karo, isagoo tusaale u soo qaatay inuu ka mid ahaa Xubnihii SNM aasaaskeeda iyo dhismeheeda ka qayb-qaatay, isla markaana wax dad lagu maamulo oo lagu mideeyo dagaalku ugu adag yahay, isla markaana uu dagaal-galiye noqday, dagaalna galay oo Rag hoggaamiyey, Arday-na hoggaamiyey. Sidaa awgeed-na, uu Midayn karo quluubta dadka reer Somaliland.
Prof: Cabdisalaan Yaasiin oo la weydiiyey in ay dad badani u arkaan Musharraxnimadiisa mid uu dhabarka soo taabtay Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan-Cirro si uu ula tartamo oo doorashada Golaha dhexe ee WADDANI ugu muuqato mid dumuraaddi ah oo lagu dhex-tartamay iyo sida tuhunkaas wax uga jiraan, waxa uu yidhi; “Dee horta taynu doonaynaa waxa weeyaan dimuquraaddiyad dhab ah, maaha mid maqaarsaar ah, istaagga aan istaagaynay maqaarsaar maaha, waa mid dhab ah.”
“Cabdiraxmaan-Cirrana soo dhawaynta uu soo dhaweeyey wuu ku mahadsan yahay, waana wax aniga iga soo go’ay inaan is-sharraxo oo aan aamminsanahay inaan wax beddeli karo ama sixi karo. Immika qolada KULMIYE intii ay caafimaad qabeen Musharraxiintu afar bay ahaayeen, intii aanay is-khilaafin ee aanay odhan Madaxweynuhu Nin gaar ah buu wataa.” Sidaa ayuu yidhi Prof: Yaasiin oo sii watay jawaabta uu su’aasha kore ka bixiyey.
Waxaanu Cabdisalaan Yaasiin oo sii wata isla jawaabta su’aashaas uu intaas ku daray oo yidhi; “Markaa, dimuquraadiyaddu waa in ay caafimaad qabtaa, waa inay qalbiga kaa gashaa dimuquraadiyaddu, maaha inay afka ahaato. Markaa, waa in qofka (Musharraxa) ay isaga ka soo godaa. Waa in uu jiraa wax qofka kellifaya oo uu doonayo inay ummaddu ku doorato oo uu barnaamijkiisa soo bandhigo.”
“Immika qolada KULMIYE waxay leeyihiin weli KULMIYE ayaannu nahay, kamay bixin, Ninkana raalli kama aha, laakiin khilaafku waa inaanu noqon mid lagu kala tago. Markaa, WADDANI waxaan rejaynayaa in si dumuquraaddi ah loogu tartamo iyadoo gacmaha la is-haysto, si dimuquraaddi ah doorasho uga dhacdo, dabadeedna qofka soo baxa si khilaaf la’aan ah loo wada dhiso oo la garab-istaago. Markaa, waan ku qanacsanahay inay WADDANI tallaabadaas qaadi doono Insha ALLAAH.” Sidaa ayuu yidhi Prof: Cabdisalaan Yaasiin.